९ महिनाको बीचमा अख्तियारले गर्यो यी १० काम
काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० महिनाको बीचमा गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरुको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले २०७५ साल साउन १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म भएका महत्वपुर्ण कार्यहरुको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको हो ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्यउपरको अनुसन्धानमा प्रभावकारिता ल्याई २३५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको। गत आर्थिक वर्षभरीमा १९४ मुद्दा अदालतमा दायर गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा अभियोजनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको।
1. आयोगमा नागरिकको सहज पहुँच अभिवृद्धि गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यउपरका उजुरीको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको। गत आर्थिक वर्षभरीमा १९,४८८ उजुरी आयोगमा रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २० हजारभन्दा बढी उजुरी रहेको।
2. सेवाप्रवाहमा हुने भ्रष्टाचार विरुद्ध आयोगको सक्रियता बढाई सूचना विश्लेषणमा आधारित अनुसन्धान मार्फत ९० वटा Sting Operation मा १२७ उपर कारबाही गरिएको।
3. भ्रष्टाचार विरुद्ध आयोगको पूर्वक्रियाशीलता अभिवृद्धि गर्न सुक्ष्म निगरानी तथा द्रुत कारबाही टोली (Rapid Action Task Force) र Intelligence Unit गठन गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यउपर सुक्ष्म निगरानी र कारबाही बढाइएको।
4. सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यउपरको कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन निर्माण गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला (Engineering Lab) को सुदृढीकरण गरी पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
5. भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक समाजको भूमिका अभिवृद्धि गर्न परीक्षणको रुपमा हरेक प्रदेशका २/२ जिल्लामा भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन गरिएको।
6. सार्वजनिक कार्यालयहरूमा आयोगका कर्मचारीहरू सेवाग्राहीका रुपमा प्रस्तुत भई सेवाप्रवाहको अनुगमन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको।
7. आयोगमा स्थानीय तहका उजुरीहरू सबैभन्दा बढि परिरहेको सन्दर्भमा आयोगका मातहत कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास र मानव संशाधन विकासमा ध्यान दिंदै कार्यालयहरूको सुदृढीकरण गरी सक्रियता बढाइएको।
8. ठूला आयोजनाहरूमा भएका भ्रष्टाचारजन्य कार्य तथा सार्वजनिक पदाधिकारी उपरको अनुसन्धान तिब्र बनाई अभियोजनको दायरामा ल्याइएको।
9. भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई राष्ट्रिय र साझा एजेन्डाका रुपमा स्थापित गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यउपर सबै सरोकारवालाबाट शून्य सहनशीलताका लागि समन्वयात्मक सहकार्य अभिवृद्धि गरिएको।